Valley Valley, toerana ambany indrindra sy tsara indrindra any Etazonia
Jeografia Geography Physical
Geography of Valley Valley
Ianaro ireo Fakan-tsary folo momba ny Valley Valley
Ny Valley Valley dia ampahany lehibe amin'ny tany Mojave any Californie akaikin'ny sisintany misy an'i Nevada. Ny ankamaroan'ny Valley Death dia ao amin'ny faribohitr 'i Inyo, California ary ahitana ny ankamaroan'ny valan-javaboahary Death Valley National. Ny Valley Valley dia manan-danja ho an'ny jeografia Amerikana satria heverina fa ambany indrindra amin'ny tontolon'ny US mifanakaiky amin'ny haavony -82 metatra (-86 m). Ny faritra ihany koa dia iray amin'ireo faritra mafana sy maina indrindra ao amin'ny firenena.
Ity manaraka ity dia lisitry ny zava-misy ara-jeografika folo fanta-daza momba ny Death Valley:
1) Ny Lohasahan'ny Valley dia manana kilaometatra manodidina ny 7 800 kilaometatra toradroa ary mikoriana avy any avaratra mankany atsimo. Ny sisintanin'i Amargosa any atsinanana, ny faritra Panamintany any andrefana, ny tendrombohitr'i Sylvania any avaratra ary ny Tendrombohitra Owlshead mankany atsimo.
2) Ny Lohasahan'ny Fahafatesana dia mirefy 123 kilaometatra monja avy eo amin'ny Tendrombohitra Whitney , izay avo indrindra amin'ny seranan-tsambon'i Etazonia eo amin'ny 14.450 metatra.
3) Mafana ny toetran'ny Lohasahan'ny Fahafatesana ary satria voafatotry ny tendrombohitra amin'ny lafiny rehetra, matetika ny olona mafana sy maina dia mihitsoka ao an-dohasaha. Noho izany, ny hafanana hafanana dia tsy mahazatra ao amin'ny faritra. Ny hafanana mahamay indrindra tao amin'ny Valley Death dia 134 ° F (57.1 ° C) tao Furnace Creek tamin'ny 10 Jolay 1913.
4) Ny mari-pana amin'ny fahavaratra mandritra ny fahavaratra dia mihoatra ny 100 ° F (37 ° C) ary ny hafanam-be amin'ny volana ambony ho an'ny Furnace Creek dia 113.9 ° F (45.5 ° C).
Ny mifanohitra amin'izany, ny salan'isa amin'ny volana Janoary dia 39.3 ° F (4.1 ° C).
5) Ny Valley Valley dia anisan'ny faritanin'i Basin sy Range, satria ambany dia ambany ny faritra avo be. Ny ara-jeolojia, ny basin ary ny topography dia mifototra amin'ny hetsika fanoherana any amin'ny faritra izay mahatonga ny tany hidina any amin'ny lohasaha sy ny tany mba hitsangana ho an'ny tendrombohitra.
6) Ny Valley Valley ihany koa dia misy fantson-drano izay mampiseho fa ilay faritra dia nisy onja goavana iray nanerana ny Pleistocene. Raha nanomboka nanafana ny tany tao Holocene ny Tany, dia nihalefy ny farihy ao amin'ny Valley Death izay androany.
7) Ny tantaran'ny Death Valley dia niorina tamin'ny foko Amerikanina ary ankehitriny, ny fokon'i Timbisha, izay tany amin'ny lohasaha nandritra ny 1000 taona latsaka, dia monina any amin'ny faritra.
8) Tamin'ny 11 Febroary 1933, ny Valley Valley dia natao Monument Nasionalin'ny Filoha Herbert Hoover . Tamin'ny taona 1994, io faritra io dia nomena anarana ho Park National (National Park).
9) Ny ankamaroan'ny zavamaniry ao amin'ny Valley Valley dia ahitana karazan-kazo madinika na tsy misy zavamaniry raha tsy eo akaikin'ny loharano. Any amin'ny toerana avo kokoa any Valley Valley, dia hita any Joshua Trees sy Pine Bristlecone. Amin'ny lohataona aorian'ny ririnina, ny Valley Valley dia fantatra fa manana voly lehibe sy voninkazo ao amin'ny faritra misy azy.
10) Ny Lohasahan'ny Valley Valley dia trano maro karazana biby mampinono, vorona, ary biby mandady. Misy ihany koa ny karazana biby mampinono lehibe kokoa ao amin'ilay faritra ahitana ny Bighorn Sheep, coyotes, bobcats, kitapo mena ary liona.
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny Valley Valley ianao, tsidiho ny tranonkala ofisialin'ny National Park National Valley.
(2010, 16 Martsa). Valley Valley - Wikipedia, ny rakipahalalana an-tserasera. Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/wiki/Death_Valley"
Wikipedia. (2010, 11 Martsa). Valam-pirenena National Valley - Wikipedia, ny rakipahalalana an-tserasera . Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/wiki/Death_Valley_National_Park
Miomana amin'ny Tsunami
Fanjakana miaraka amin'ireo kolejy lava indrindra
Jeografia ho an'ny Firenena Hafa
Fandaniam-bahoaka sy fihotsahan'ny tany
Ity History of Supercontinent Pangea ity
Rano: ny loharanon-tsakafo
Ny endriky ny firenena iray dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny faharetany sy ny fitiavany
Solar Radiation ary ny Albedo ny tany
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Mechanical sy Electropneumatic Paintball Gun
Politika ivelany an'ny governemanta amerikana
Ny fomba fiasa ara-batana
The Horsehead Nebula: Ny rahona mainty miaraka amin'ny endrika mahazatra
Inona avy ireo Fomba fambolena Exponential?
Ny fifandraisana eo amin'ny fitantanana ny ady amin'ny herisetra sy ny herisetra amin'ny herisetra
Inona no atao hoe rivotra? Fantaro ireo mety ho azo
Fomba hisafidianana fitaovana ho an'ny fanomezana
Momba ny Centre Getty avy amin'i Architect Richard Meier
Fahavitan-tena sy faharetan'ny vanim-potoana
PM Jean Chretien: Mpifanolo-bodirindrina amin'ny tsindry politika
Fanesorana hazo iray ara-dalàna - Fahatakarana ny dingana fanesorana hazo
Inona no atao hoe Sigma?
Fandikana ny vanim-potoana taloha amin'ny teny anglisy ho amin'ny teny espaniola
Top Foreigner sy Lou Gramm Solo Songs of '80s
10 Torohevitra momba ny fampidirana lolo any an-tokotany
Ny fijerin'ny Insider ny Cosmology Taoist
Ny tontolo manodidina an'i Italo Calvino "tanàna tsy hita maso"
Ny fomba fiovana amin'ny fiovam-bola avy amin'ny Canadian income
Ny anaran'i GONZALEZ dia anarana sy orinasa
Japoney Meksikanina Mena: Mena ny lokon'ny fitiavana?
Kôlônôjiana talohan'ny Kolomiela
Famaritana ny matoanteny Verb French: Avoir, Être, ary Faire
CSUSM, Cal State San Marcos GPA, SAT sy ACT Data